Home : Worldwide News : Businesses to hand power to Zimbabweans
Businesses to hand power to Zimbabweans
HARARE, Zimbabwe -- Zimbabwean President Robert Mugabe signed legislation mandating foreign- and white-owned businesses surrender majority ownership to "indigenous" people.
The law passed in September but Mugabe's consent came in an announcement in the state-run Sunday Mail, CNN reported Monday.
The law says the businesses have to surrender at least 51 percent of operational control to "indigenous" Zimbabweans described in the measure as "any person who, before the 18th April, 1980, was disadvantaged by unfair discrimination on the grounds of his or her race, and any descendant of such person."
The move comes weeks before parliamentary and presidential elections in Zimbabwe where Mugabe faces tough challenges from the leader of the Movement for Democratic Change Morgan Tsvangirai and former Finance Minister Simba Makoni.
Zimbabwe won independence on April 18, 1980, and the 84-year-old Mugabe served as the country's leader since then.
Runoff election in Zimbabwe likely by UPI posted on Apr 02,2008
Mugabe's party losing in Zimbabwe election by UPI posted on Mar 31,2008
Mugabe faces challenge from within by UPI posted on Feb 05,2008
Court to hear election case, not sure when by UPI posted on Apr 07,2008
Election officials charged with vote fraud by UPI posted on Apr 08,2008